Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: November 2012
Other Language အသုံးပြုလို့ ရအောင် ဖောင့်တစ်ခုခု ဘာညာ ထပ်ထည့်ဘို့ မလိုပါဘူး။ ဝင်းဒိုးမှာ ပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ကိုရီးယားဖောင့်နဲ့ စာရိုက်ဘို့အတွက် ကိုရီးယားကီးဘုတ်သာ လိုပါတယ်။
ကိုရီးယားကီးဘုတ် ထပ်ထည့်ဘို့ Control Panel > Regional & Language > Keyboards & Languages > Change Keyboard > Add Input Languages မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကီးဘုတ်ကို ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။
ထည့်နည်း အောက်မှာ ပုံတွဲလိုက်ပါတယ်။
Posted by Ko Gyii at 2:58 PM No comments :
Posted by Ko Gyii at 2:56 PM No comments :
Advance Appearance က ဖောင့်စာရင်းမှာ မိမိလိုချင်တဲ့ ဖောင့် မပေါ်နေခြင်း
ဖောင့်တစ်ခုဗျာ (otf or ttf) ကို ကျနော် Windows Settings, Desktop Appearance ရဲ့ Advance Appearance က ဖောင့်စာရင်းထဲ ထည့်ချင်ပါတယ်။ ဘာလိုနေလဲမသိ။ ဘယ်လို ထည့်ရမလဲ အကြံပေးပါဦး။ Font folder ထဲ Install font လုပ်ရုံနဲ့ မပေါ်လာလို့ပါ။ ကုတ် ဖြစ်ဖြစ် reg hack ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုလောက် :) — with Speak Nut and4others.
လို့ တလောက ကျနော် မေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ ခုတော့ ဟိုကလိ ဒီကလိရင်းနဲ့ အဖြေသိသွားပါပြီ။ ဘော်ဒါများ ဖတ်ချင် ဖတ်ရအောင် မှတ်စုထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အပေါ်က ပုံမှာ Advance Appearance က ဖောင့် စာရင်းမှာ ဇော်ဂျီ မပါကြောင်း ပြထားပါတယ်။ ဘာကြောင့် မပါရသလဲ? အဖြေကို တန်းမပြောခင် Advance Appearance မှာ ပါတဲ့ ဖောင့်စာရင်းအကြောင်းပြောကြည့်ပါမယ်။ သူ့စာရင်းဟာ ထိုစက်ထဲ အင်စတော ထည့်ထားသမျှ ဖောင့်တွေ အကုန် ပြတယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ ဒါ မမှန်ပါဘူး။ တိကျအောင် ပြောရရင် "အင်စတော ထည့်ထားသမျှ ဖောင့်တွေအနက်က system locale နဲ့ ကိုက်တဲ့ဖောင့်တွေပဲ Advance Appearance မှာ ပြပါတယ်" လို့ ကွန်းမန့်ပေးလိုပါတယ်။
ဒီလို ထောက်ပြလိုက်ရင် ပုံမှာပါတဲ့ system ရဲ့ locale က ဘာလဲဆိုတာ မှန်းကြည့်ရင် သိသာပါပြီ။ System Locale က Japanese ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အပေါ်က ပုံမှာ Advance Appearance က ဖောင့် စာရင်းမှာ Japanese Unicode code point တွေ ပါတဲ့ ဖောင့်တွေပဲ စာရင်းဝင်ပါတယ်။
ဒါဆို ဇော်ဂျီဖောင့်က Japanese Unicode code pointတွေ ပါလား မပါဘူးလား စစ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ အောက်ပုံကို ကြည့်ပါ။
ဒါ ဇော်ဂျီဖောင့် ရဲ့ naming properties ဖြစ်ပါတယ်။ Japanese Unicode code point တွေ မပါတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Japanese System Locale စက်မှာ Advance Appearance က ဖောင့် စာရင်းမှာ ဇော်ဂျီ မပါတာ ရှင်းသွားပါပြီ။
နောက်တစ်ဆင့်က အဲ့ဒီစက်ရှိ Advance Appearance က ဖောင့် စာရင်းမှာ ဇော်ဂျီဖောင့် ပါအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ စဉ်းစားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဇော်ဂျီဖောင့်ကို Icon ဖောင့်အဖြစ် မြန်မာများ ဘာလို့ ထည့်ချင်နေတာလဲ ဆိုရင် Icon မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို ရွေးပေးမှသာ မြန်မာစာတွေ အတုံးအတုံး ပေါ်ခြင်းကို ပြေလည်စေမှာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ပြေလည်ဘို့ နည်းလမ်းများ အောက်ပါအတိုင်း စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်။
၁) System Locale ကို English ထားပေးလိုက်မယ်။ (သို့မဟုတ်) ဇော်ဂျီဖောင့်က လက်ခံတဲ့ အခြား Locale တစ်ခုခု ထားပေးလိုက်မယ်။ ပြီးတော့ Icon font ကို ဇော်ဂျီပေးလိုက်မယ်။
အကျိုး = ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ရေးထားတဲ့ မြန်မာစာတွေ ဝင်းဒိုး အိုင်ကွန် Desktop မှာ မြင်ရမယ်။
အပြစ် = ဇော်ဂျီဖောင့်မှာ မပါတဲ့ Unicode Code Point တွေ အတုံးတုံး ဖြစ်ကုန်မယ်။ (ကုစားရန် နည်းလမ်း။ ဇော်ဂျီနဲ့ ၎င်း Unicode Code Point တွေ ဖတ်လို့ ရနေခဲ့တဲ့ ဖောင့်နဲ့ Font Link လုပ်ရပါမယ်။)
၂) ဇော်ဂျီဖောင့်ထဲမှာ မပါသေးတဲ့ Unicode Code Point က Glyph တွေ ၎င်းဇော်ဂျီဖောင့်ထဲ ကူးထည့်မယ်။ ဒီ ဖြစ်စဉ်မှာ ဆိုရင်တော့ Japanese code point က Glyph တွေပေါ့။ ဇော်ဂျီဖောင့် ပြုလုပ်သူ Maker က ဒါကို (သူ့ဖောင်ကို ဝင်ပြင်တာကို) ခွင့်ပြူချက် ပေးချင်မှပေးမယ်) လက်ရှိ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို မွမ်းမံထားတဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ အစားထိုးမယ်။ စက်ကို ရီစတတ်ပေးမယ်။ ဒါဆို Advance Appearance က ဖောင့် စာရင်းမှာ ဇော်ဂျီဖောင့် ပါလာမယ်။
အကျိုး = ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ရေးထားတဲ့ မြန်မာစာတွေ ဝင်းဒိုး အိုင်ကွန် Desktop မှာ မြင်ရမယ်။ System Locale ကိုလည်း ပြင်စရာ မလိုတော့။
အပြစ် = Open Type (ttf) ဇော်ဂျီဖောင့်ထဲမှာ True Type Collection (ttc) ထဲက Double Width Characters တွေ လာထည့်တာ ရေရည် print/view render အဆင်ပြေပါ့မလား တွေးမိတယ်။ ဇော်ဂျီနဲ့ဂျပန်ဖောင့် ပြုလုပ်သူတွေ သိရင် ခွင့်ပြုပါ့မလား တွေးမိတယ်။
၃) က (၂) နဲ့ ပြောင်းပြန်ပေါ့။ ဇော်ဂျီဖောင့်ထဲက Myanmar Unicode Code Point က Glyph တွေကို လက်ရှိအိုင်ကွန်ဖောင့်ထဲ ကူးထည့်မယ်။ (Tahome / SegoeUI / Ms Gothic စသဖြင့် တစ်ခုခု) ၎င်းဖောင့် ပြုလုပ်သူ Maker က ဒါကို (သူ့ဖောင်ကို ဝင်ပြင်တာကို) ခွင့်ပြူချက် ပေးချင်မှပေးမယ်) လက်ရှိဖောင့်ကို မွမ်းမံထားတဲ့ ဖောင့်နဲ့ အစားထိုးမယ်။ စက်ကို ရီစတတ်ပေးမယ်။ ဒါဆို Advance Appearance က ဖောင့် စာရင်းမှာ ဇော်ဂျီ Glyph တွေ သွတ်သွင်းထားတဲ့ လက်ရှိအိုင်ကွန်ဖောင့်ဖြစ်လာမယ်။ Icon font ကို ဇော်ဂျီပေးစရာ မလိုတော့။
အကျိုး = ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ရေးထားတဲ့ မြန်မာစာတွေ ဝင်းဒိုး အိုင်ကွန် Desktop မှာ မြင်ရမယ်။ System Locale ကိုလည်း ပြင်စရာ မလိုတော့။ Icon font ကိုတောင် ဇော်ဂျီပြောင်းပေးစရာ မလိုတော့။
အပြစ် = ဇော်ဂျီနဲ့ဂျပန်ဖောင့် ပြုလုပ်သူတွေ သိရင် ခွင့်ပြုပါ့မလား တွေးမိတယ်။ အခြား ပြဿနာ မရှိ။
၄) လက်ရှိအိုင်ကွန်ဖောင့် (Tahome / SegoeUI / Ms Gothic စသဖြင့် တစ်ခုခု)နဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ Font Link လုပ်မယ်။ စက်ကို ရီစတတ်ပေးမယ်။ ဒါဆို Advance Appearance က ဖောင့် စာရင်းမှာ Icon font ကို ဇော်ဂျီပေးစရာ မလိုပဲ မြန်မာစာတွေ မြင်ရမယ်။
အကျိုး = ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ရေးထားတဲ့ မြန်မာစာတွေ ဝင်းဒိုး အိုင်ကွန် Desktop မှာ မြင်ရမယ်။ System Locale ကိုလည်း ပြင်စရာ မလိုတော့။ Icon font ကိုတောင် ဇော်ဂျီပြောင်းပေးစရာ မလိုတော့။ သူများ ဖောင့်တွေ ဝင်ပြင်စရာ မလိုတော့။
အပြစ် = Regedit သုံးပြီး လုပ်ရလို့ အမှားအယွင်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ။ မပြင်ခင် အခြေအနေကို Backup လုပ်ထားသင့်။ အခြား ပြဿနာ မရှိ။
အခြားနည်း တွေ့ရင် update လုပ်ပါဦးမည်။ 2012-နိုဝင်ဘာ-18 Lu Zein မှ တင်ပြလိုက်ပါသည် :)
Posted by Ko Gyii at 3:01 PM No comments :
dfsvc.exe has encounteredaproblem and needs to close ဆိုတဲ့ ပြဿနာမျိုး ကြုံဘူးကြပါသလား ?
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်တတ်သလဲ ဆိုရင် သင်ဟာ
- ဝင်းဒိုး Vista, ဝင်းဒိုး7စက်ကို သုံးနေမယ်။
- Dotnet Clickonce feature ပါတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို စက်ထဲ အင်စတော သွင်းဘို့ လုပ်နေမယ် ဆိုရင်
ထိုကဲ့သို့သော ပရိုဂရမ်မျိုးကို စက်ထဲ သွင်းလို့ မအောင်မြင်ပဲ ဖော်ပြပါ Error နဲ့ ရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ သင့် စက်ထဲရှိ Dotnet Framework ကြောင်သွားလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိ စက်ထဲ ရှိ DotNet Framework ကို ပြန် Re-install လုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းနည်းတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
အလွယ်ကူဆုံး ဖြေရှင်းနည်းကတော့ Dotnetfx Cleanup Tool ကို အသုံးပြုခြင်းပါပဲ။
Credit to http://clientsupport.curse.com
ဒီ Tool က သေးငယ်သလို ထိရောက်ပါတယ်။ သင့်စက်ထဲမှာရှိတဲ့ DotNet Framework ပြဿနာတွေ ချက်ချင်း ပြေလည် သွားပါလိမ့်မယ်။
၎င်း Tool ကို မူရင်း Source က ဆွဲချယူနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် သိမ်းထားတဲ့ ဒီနေရာကလည်း ဆွဲချယူနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာချင်း တိုက်ဆိုင်လို့ အခက်အခဲတစ်ခု ပြေလည်သွားရင် ကူညီရကျိုးနပ်တာပေါ့ ခင်ဗျာ :)
Posted by Ko Gyii at 9:24 AM No comments :
Internet Download Manager Integration module for Mozilla Firefox Browser
IDM CC 7.3.25
IDM CC enable လုပ်မရလို့ Firefox ကနေ IDM နဲ့ ဒေါင်းလို့ မရသည် ရှိခဲ့သော် ၎င်း IDM CC ကို ဗားရှင်းမြင့်တာနဲ့ လဲပေးဘို့ လိုပါတယ်။
အောက်ကပုံပါအတိုင်း Firefox ရဲ့ Add-on ->Extensions စာရင်းက IDM CC ကို စစ်ပါ။ disable ဖြစ်နေရင် ၎င်းIDM ကောင်းပါလျက် ၎င်းကြောင့် လင့်ခလုတ် မပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံပါအတိုင်း Check for updates ကို နှိပ်ပြီး update လုပ်ကြည့်ပါ။
အပေါ်ကလို Check for updates လုပ်မရတဲ့ သူများအနေနဲ့ Manual Install လုပ်ဘို့ လိုပါမယ်။
ထို့ကြောင့် အဆင်ပြေစေရန် IDM cc version 7.3.25 ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
IDM CC ကို မူလပိုင်ရှင် IDM ရဲ့ site မှာ သွားရောက် ရှာဖွေယူနိုင်ပါတယ်။ လင့်က
ဖော်ပြပါ ဆိုဒ်မှာ မတွေ့သော် (ဝါ) အမြန်လိုချင်သော်..
ဖိုင်ကို ဒီမှာ ဝင်ယူပါ။ ဖိုင် အမည်က idmmzcc.xpi ဖြစ်ပါတယ်။
Firefox ရဲ့ Add-on ->Extensions စာရင်း က ပင်နယံလေးကို ဆွဲချပြီး Install Add-on from file လုပ်ပါ။
ခုနက ယူထားတဲ့ ဖိုင် idmmzcc.xpi ကို ရွေးပေးပြီး Firefox ကို restart ပေးလိုက်ရုံနဲ့ ပြေလည်သွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar-English-Czech Students Dictionary 1st Edition (Off-line version, mssqlce, dotnet 3.5 sp1)
မြန်မာ <-> အင်္ဂလိပ် <-> ချက် ဒေရှင်နရီ
ဝင်းဒိုး စက်ထဲ ထည့်ထားပြီး သုံးဘို့ပါ။
Windows Operating System တစ်ခုခု
DotNet Framework 3.5 sp1 မရှိရင် အလိုလို ဆွဲချယူပါမယ်။
ယွန်းချို ယူနီကုတ် အစစ် ဖောင့်လိုပါတယ်။ မရှိရင် ဒီမှာယူရပါမယ်။
Yunghkio Font http://www.yunghkio.com/unicode/yunghkio1.1.1.ttf (သို့မဟုတ်) ၎င်း ဖောင့်ကို ကျနော် သိမ်းထားသော ဒီနေရာက က ယူပါ။
Mssqlce 3.5 sp2 မရှိရင် အလိုလို ဆွဲချယူပါလိမ့်မယ်။ http://download.microsoft.com/download/E/C/1/EC1B2340-67A0-4B87-85F0-74D987A27160/SSCERuntime-ENU.exe
ဇော်ဂျီနဲ့ သုံးချင်ရင် ဇော်ဂျီဖောင့် လိုပါမယ်။ အများစုမှာ ရှိပြီးသားမို့ လင့်ထပ်မပေးတော့ပါ။
DOWNLOAD ဆွဲချရန် အင်စတော်လာ - http://db.tt/3ekPuwsT ဒလော့ဘောက်ထဲမှာ ရှိပါမယ်။
ဇစ်ဖိုင် (zip) ပါ။ ဆွဲချလို့ ရလာလျှင် right click ခေါက် တနေရာရာမှာ extract ဖြည်ပါ။ ရလာတဲ့ setup.exe ဖိုင်ကို run ပါ။ ဒါဆို ShweBo -> Myanmar-English-Czech Students Dictionary 1st Edition အမည်နဲ့ Programs အုပ်စုထဲရောက်သွားပါပြီ။ အင်တာနက် မရှိတဲ့ နေရာမှာလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
Source & Credit: http://code.google.com/p/myanmar-english-czech-students-dictionary/
Posted by Ko Gyii at 11:27 AM 1 comment :